Shina tsotra vehivavy lamaody poketra kely retro style voninkazo faribolana fohy poketra 3 fonosana fonosana Factory and Supplier | Sansan
Vehivavy tsotra modely miendrika volony kely retro style voninkazo poketra fohy poketra poketra 3 fonosana mivalona
Mpitsangana iPad azo zahana, Mpitazona tablety。
Ny akora PU azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana dia safidin'ny rano, ny rano, ny hamandoana, malefaka ary salama. Mirefy 3,9 santimetatra x 3.5 santimetatra x 1,2 santimetatra izy io (10 eo ho eo ny 9 cm x 3.2 cm) ary milanja 110 grama.
Tovovavy azo ampiharina vehivavy
Material PU hoditra
Fametaka aforitra 3 vody
Fomba fanokafana hidin-trano
Ny firafitry anatiny anaty fonosana kely toeran'ny sary, mihazona volavolan-dalàna, toerana misy karatra, takona miafina, toeran'ny fanovana
Fandraisana anjara efamira mitsivalana
Style Retro fomba
Singa malaza voninkazo
Fampiasana fanomezana azo ampiharina lanonana fanokafana, tombontsoa ho an'ny mpiasa, lanonana ara-barotra, fampakaram-bady, tokantrano, drafitra ho an'ny daholobe, fitsingerenan'ny andro, fitsingerenan'ny fitsangatsanganana, fankalazana fitsingerenan'ny andro, fankalazana loka, fetibe, fampiroboroboana ny dokam-barotra, fanomezana
Hamoaka LOGO Eny
Ny fanamboarana Custom Eny
Color volomparasy, manga, mainty, mavokely, tsaramaso mena
Ny lanjan'ny vokatra 0.11kg
Haben'ny vokatra 10 * 9 * 3.2cm
Ity kitapo poketra ity ity dia manana toerana be banky 1 lehibe, toerana fitahirizana karatra 5, toerana misy sary mangarahara 1 ary takona miafina 2 miafina. 1 manova poketra miaraka amina endrika vy vita amin'ny vy dia afaka mitahiry fanovana sy zavatra kely. Ny fampiasana ara-dalàna dia ampy hanatanterahana ny fangatahana.
Ny velaran'ny poketra dia voaravaka mavokely sy marevaka maintso, mampiseho ny hatsaran-tarehy. Mifantoka amin'ny antsipiriany momba ny fanodinana isika, ary manohy ny vokatra tonga lafatra. Mino izahay fa ny fitaovana avo lenta, volavolan-tsaina mahay ary ny asa tanana an-kilasy voalohany dia afaka mitondra anao traikefa momba ny vokatra mihatsara.
Mety amin'ny vehivavy amin'ny vanim-potoana rehetra. Azo omena ho fanomezana ho an'ny tenanao, ny mpianakavy, ny sipa, ny manaitra azy ireo ary mahafatifaty izy ireo, ary mitondra andro tsara.
Fandoavam-bola: 30% fandoavana mialoha + 70% fifandanjana alohan'ny fandefasana
Fitaterana: rivotra, ranomasina ary tany
Previous: Ny poketra fanaovan-damba fohy an'ny lehilahy vita amin'ny kitapo
Manaraka: New Wallet Lady fohy lamaody Koreana Zipper Tassels 2 valiny valiny
Mifantoha amin'ny fanomezana vahaolana ny mong pu mandritra ny 5 taona.
Dobodin'ireo lehilahy matevina ny kitapo amin'ny marika lehilahy lehilahy ...
Ny randram-bolan'ny lehilahy kely
Ny vaovao USB manara-penitra fironana c ...
Kitapo vaovao kitapo fonon-tànana lava zipper clu ...
Zava-kanto mavokely mavokely fohy ao amin'ny rindrina Lady ...
Kitapom-pitiavana vaovao fonosana vehivavy kely efa ela contra ...